Rofomex wuxuu u dhaqaajiyaa Mexico dhanka Phosphate isku filnaanshaha -Ellicott Dredges
Rofomex wuxuu u dhaqaajiyaa Meksiko Meel ku Saabsan isku Filnaantiisa
Source: Injineernimada & Macdanta
Roca Fosforica Mexicana SA de CV (Rofomex) waxay ka bilaabeen hal minfofofofofof oo loo yaqaan 'Phosphate mine' gudaha Baha California Sur ee 1981 iyo mid kale oo ku jirta 1982. Soosaarka wadajirka ah ee hawlgalladaas ayaa la filayey inay Mexico ka qaado meel ku dhow wadarta ku tiirsanaanta dhoofinta dhagaxa fosfoofka ee 1980 illaa isku filnaanshaha 1985. Sanadihii la soo dhaafay, Mexico waxay soo dejisay qiyaastii 1.7 milyan mt / yr oo ah dhagaxa fosfooraska, badiyaa laga keenay Florida ee Mareykanka iyo Morocco. Dawladda Mexico ayaa mudnaanta sare siisay miinooyinka Rofomex taas oo qayb ka ah barnaamijkeeda si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha Mexico.
Midka ugu horreeya miinooyinka cusub ee Rofomex wuxuu ku yaal San Juan de la Costa oo ku yaal Gacanka Kalifoorniya. Waxay soo saartay xarunteedii ugu horreysay bishii Janaayo 1980, markabkii ugu horreeyay ee xamuul ah wuxuu ka tagay xadka Rofomex oo ku sii jeeday Lazaro Cardenas oo ku taal Xeebta Baasifiga ee Mexico bishii Abriil. Rarista rarka waxaa loo qorsheeyay inay dhacdo 12-kii maalmoodba mar.
Laga soo bilaabo Lazaro Cardenas, fosfooska fosfooska waxaa loo rari doonaa tareenka xayndaabka Fertimex ee San Luis Potosi, Queretaro, iyo Guadalajara. Xilli dambe, shixnadaha qaarkood waxay ku sii gudbi doonaan kanaalka Panama iyo Gacanka Meksiko una gudbaan dhismaha Fertimex ee dekada Pajaritos.
Awood ahaan, macdanta San Juan de la Costa waxay soo saari doontaa 730,000 mt / yr oo ah darajooyin uruurin ah oo qiyaastii 31% P2O5 ah marka la isku daro godadka furan iyo howlaha macdanta dhulka hoostiisa laga soo saaro oo laga soo saaro miisaanka darajo ahaan 18% P2O5 Waxsoosaarka billaha ah ee uruurinta ayaa guud ahaa 1,200 mt bishii Janaayo, 12,800 mt bishii Febraayo, 12,000 mt Maarso, iyo 20,000 mt Abriil. Wax soosaarka waxaa loo qorsheeyay in la dhiso ilaa 60,000 mt bishii Luulyo oo ay ku sii sugnaato heerkaas illaa sanadka intiisa kale.
Santo Domingo, xeebta Baasifigga ee Jasiiradda Baja California, Rofomex wuxuu ka dhisay miino soo saareysa 1.5 milyan mt / yr oo urursan iyadoo qodeysa macdanta ciidda xeebta oo dhigta qiyaastii 4.5% P2O5 heerka darajada 3% P2O5. Laba Ellicott goynta nuugista madaxa quudiyo wershadaha barxadaha-dul-fuusha ee aasaasiga ah, kaas oo ku sabayn doonta aagga miinooyinka ee ka dambeeya haamaha.
Rofomex wuxuu ka bilaabmay Santo Domingo bartamihii-1982, iyo 1984-kii labada shirkadood ee cusub ee macdanta waxay soo saareen wax-soo-saarka fosfateerka muddada-gaaban ee Mexico, iyadoo ay jirto xad-dhaaf ah oo loo heli karo dhoofinta. Sannadkii 1985 dhir cusub oo loo yaqaan 'Fertimex' ayaa loo qorsheeyay inay soo saaraan wax soo saar, kobaca dhaqaalaha iyo tirada dadka ayaa kor u qaadi doona baahida fosfateetka ee gudaha Mexico, waxaana la saadaalinayaa yaraanshaha fosfateerka oo soo cusboonaaday. Iyadoo la fiirinayo dalabkan, Rofomex wuxuu qorsheeyay ballaarin dhan 4.5 milyan mt / yr sabuuradaha sawirada.
Muddo dheer, Meksiko waxay leedahay kheyraad fosfiga wax ku ool ah oo ay ku soo jiidan karto Baja California Sur, marka laga reebo labada deebaaji ee la soo saaray. Khubarada cilmiga bayoolajiyadda ee Rofomex ayaa ka warbixiyay dhacdooyin kale oo fosfoos ah oo ka dhacay San Hilario, Santa Rita, Tembabiche, La Purisima, San Jose de Castro, iyo San Roque. Kuwaas ka mid ah, deebaajiga San Hilario ayaa ah kan ugu badan ee la baaro, iyadoo la muujinayo calaamadaha qulqulka dhagax weyn ee darajada 11-13% ee dhagaxa weatured iyo 14-18% dhagaxa aan la jaanqaadin ee hoos yimaada 30-80m of overburden. Aagga Santa Rita, uruurinta dhaqaale ee suurtagalka ah ee fosfooraska waxay ka dhacdaa qulqulatooyinka dhowaan la sameeyay ee hoos imanaya culeys xad dhaaf ah, laakiin kuwan ayaa weli ah kuwo si aad ah loogu baaro.
Kheyraadka weyn ee Santo Domingo
Jiritaanka ciidda fosfateetka ee aagga Bahia de Magdalena ee Xeebta Baasifigga ayaa la ogaa tan iyo 1914, iyo 1955 Hanna Mining iyo Minera Fornos waxay ku sameeyeen daraasad suurtagalnimada aagga. Si kastaba ha noqotee, kaabayaal la'aan iyo Mexicaniyeynta warshadaha macdanta ayaa sababay Hanna inay ka noqoto. Sannadkii 1974, "Consejo de Recursos Minerals," oo ah hay'ad dawladeed, ayaa eegis kale ku samaysay aagga waxayna sidoo kale go'aansatay in macdanta aan laga suurtagelin dhaqaale ahaan. Sannadkii 1978-kii, khubarada cilmiga cilmiga dhulka ee dowladda waxay sameeyeen barnaamij qodis ah, ka dib markii lagu xareeyay xeebta xeebo leh godad u dhexeeyaa 2-km, waxayna ogaadeen in fosfoorasyada ay ku jiraan masaafo ka badan 70 km. Xuduudihii dhabta ahaa lama helin ka hor inta aan la gaarin barnaamijka qodista. Fomento Minero waxay eegtay himilada kale, waxayna go aansatay in geedi socodka ka faa'iideysiga dhaqaalaha la horumarin karo, ayna ku sii socoto hormarinta miinada.
Xadka galbeedka ee deebaajiga Santo Domingo waa Badweynta Baasifigga, ballackiisuna dhanka bari wuxuu u jiraa 20 km. Xaqiiqdi waa been-abuur, oo aan lahayn wax ciid ah ama aan lahayn dabool, oo dhumucdiisuna celcelis ahaan tahay 19 m. Relief waa mid yar, oo leh wiishyada ugu badan ee dhif ah oo ka sarreeya heerka '15 m' oo ka sarreeya heerka badda. Jidhka macdanta ayaa ah da'da dhowaan, iyo fosfoosku wuxuu u dhacaa sida ganaax, wareegsan, ciid macangag ah, badiyaa wuxuu ku yaalaa jajabinta isugeynta ee dibaajiga. Qaddar yar oo magnetite, ferromagnesium, rutile, iyo sphene, iyo sidoo kale macdan qodayaal, ayaa jira. Macdanta Clay badanaa way maqan yihiin, marka laga reebo inay aad ugu dhowdahay dusha sare. Fasalada celcelis ahaan 4.5% P2O5. Midabku aad ayuu u kala duwan yahay laakiin sida caadiga ah wuxuu huruud u yahay bunni madow. Kheyraadka waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan 1.1 bilyan oo mt oo dhagax ah.
Daraasado faahfaahsan ayaa loo sameeyay laba meelood oo qodista macdanta ah, Elenas iyo Prados, iyagoo adeegsanaya qalabka qodista Longyear. Aagga Elenas waa koonfurta-ugu badan labada waxaana qiyaasta 6 km waqooyi-koonfur u jirta 3.5 km bari-galbeed. Xudduudkeeda koonfureed waxay ku egtahay waqooyiga dekeda kalluumeysiga ee Lopez Mateos. Aagga Prados wuxuu la mid yahay xadka waqooyiga ee aagga Elenas waana xNUMX km waqooyi-koonfur. Xadka galbeedka ee macdanta waa estuary oo uu sameeyay jasiiradda xannibaadda, Isla Magdalena.
Labada aag ee sahaminta leh waxaa lagu sahamiyay iskuxirka 500 m, iyadoo la adeegsanayo gawaarida xamuulka gawaarida xamuulka ah ee qodaya 4-in dia dia. Qiyaastii tijaabooyinka 5,000 ayaa laga soo qaaday godadkan xilliyada tooska ah ee 1.5-m. Dhererka ugu hooseysa ee daloolka wuxuu ahaa 70 m oo celcelis ahaan dalool dheer oo dhexdhexaad ah wuxuu ahaa 30-m. Tijaabooyinka Ore waxay raacday dhaqankii lagu aasaasay warshadaha 'phosphate Florida'.
Falanqaynta nidaamyada macdanta ee mashruuca Santo Domingo waxaa ka mid ahaa tixgelinta bakhaarada bulukeetiga, khadadka, majarafadaha, iyo mashiinnada qulqulaya. Xulashada nidaam ku saleysan go'doominta ayaa ugu horeyn ku saleysan xaqiiqda ah in nidaamyada kale aysan sifiican uga shaqeyn karin heerka badda. Kusoo shaqeeynta iyo kharashyada dayactirka ayaa kiciyay xulashada ugu dambeysa ee liifinta dareeraha mashiinka faashad leh madaxooda nuugista xNUMX-dhexroor.
Laba Ellicott® Dredges brand-ka ayaa la isticmaalay, mid kasta oo awood u leh bamgareynta qiyaastii 2,000 mt / hr ee xawaaraha adag ee la warshadeeyay ee ka-faa'iideystayaasha aasaasiga ah ee saboolka ah. Dredge kasta wuxuu kuxiranyahay warshada dabacsan, 600-m, 24-in dia pipe. Madaxyada dredge waxay leeyihiin hoose hoose ee 15 m. Labada qulqulatooyin ayaa la isku daray si ay uga shaqeeyaan hal mining hore oo celcelis ahaan ah 21 m. Hal qashin-qub oo ku shaqeeya awoodda ayaa awood u leh inuu geedka ku sii hayo meel u dhow. Qalliinka caadiga ah, labada dredges waxay si wada jir ah uga shaqeeyaan qiyaastii 70% awoodooda qiimeynta.
Macdanta nuugista waxaa lagu sameeyay darajo goos goos ah oo ah 3% P2O5 iyadoo soo saareysa celcelis celis macdan ah 4.56% P2O5in aagga macdanta Prados iyo 4.29% aagga Elenas. Looma baahna in laga qaado culeys culus; si kastaba ha noqotee, qashinka gudaha ee macdanta ayaa u mireyn doona fasalka quudinta geedka ka-faa'iideystayaasha ilaa 4.05% P2O5. Iyadoo celcelis ahaan CaO uu yahay 9.34%. Heerka macdanta waxaa loo qorsheeyay 16.5 milyan mt / yr, oo shaqeynaya seddex isbedel maalintii, 330 maalmood sanadkii.
Wajiga macdanta ayaa celcelis ahaan ka sareeya 6 m heerka badda iyo 12 m oo ka hooseysa heerka badda. Macdan qodista xulashada marwalba suurtagal ma ahayn, laakiin aagagga ay ka kooban tahay 'CaO' oo sareeya ayaa laga fogaaday markii ay suuragal tahay. Muunad qoditaanno ayaa laga sameeyay miiqyada '100-m', iyadoo god walba uu u taagan yahay qiyaastii 225,000 mt of ore.
Qulqulayaashu waxay ku shaqeeyeen sahayda korantada ee 4,160v, 60 hertz. Beddel ayaa ku yaallay haanta sabaynaysa.
Iskuxirida ciidda Phosphate Sands
Sababtoo ah nabarrada ku yaal kor iyo hoos heerka badda waxay leeyihiin astaamo xoogaa kala duwan, gaar ahaan waxyaabaha ku jira CaO, Rofomex wuxuu sameeyay hanaan ku habboon labada geesood. Nidaamku wuxuu oggol yahay ku-tuurida dabo-ku-wareegga aagga laga qodo miinada marwalba. Sida San Juan de la Costa, biyaha badda waxaa la isticmaalay inta lagu gudajiray howlaha, iyadoo sheyga kaliya lagu maydhay biyo saafi ah si loo baabi'iyo koloriinta.
Waxyaabihii ugu waaweynaa ee howsha waxaa ka mid ahaa warshad duulista aasaasiga ah oo ku taal xayndaab ka dambeysa qulqulka iyo warshad duulista sare, haamaha wax lagu dhaqo, iyo miirayaasha ku yaal xeebta. Sunta ayaa laga soo daadgureeyay barxadda ilaa warshada xeebta iyada oo loo marayo tuubooyin ay ka taageeraan barkado.
Hoos udhac ka yimid qulqulaha ayaa ku quudin jiray warshadda aasaasiga ah ee xayndaabka sicirka 2,200 mt / hr, iyadoo dheecaanku si hoose ugu socdo oo la quudiyay marka loo eego labada shaashadood ee hal-deck ah oo lagu daray 1 / 4-inji qashinka-dabiiciga ah, sida qolofka, iyo bakeeriga ka soo xajmi badan. Shaashadda shaashadda ayaa loo duubay si meesha looga saaro qayb ka mid ah ka-jaridda xayrarka 150-mesh iyo slimes iyo in la xoojiyo slurry. Ganaaxyada waxay ku qulqulayaan culeys ku aadan aag qashin qaad, iyo qulqulka qulqulka ayaa hoos ugu dhacay haamaha kaydinta, kaasoo bixiyay 1 / 2 hr awoodda qalliinka.
Laga soo bilaabo haamaha qalliinka, matoorrada ayaa u ruqaya slurry-ka-kala-qaybiyeyaasha, halkaas oo lagu daray xirmooyinka 'XeshX-mesh' laga saaray oo lagu bamgareeyay qashin. Slurry-kii ayaa markaa loo gudbay bangiga labaad ee cyclones, kaas oo meesha ka saaray wixii haray ee xaddiga xNUMX-mesh oo adkeyn kara isu-gaynta xirmooyinka '28%'. Diyaarinta ubaxaynta, duufaanta daadadku waxay ku ekeeysay dhowr marxaladood. Saliida Diesel waxaa loo isticmaalay emulsion-ka.
Kalluumeysiga shuruudaysan ayaa lagu qasi jiray 32-35% biyo adag oo lagu quudiyay afar bangi oo ka kooban 500-ft3 unugyada sabeynta. Dabo ayaa loo daadiyay si qashin ah, iyo isku-uruurinta aasaasiga ahi waxay ku sii qulqulaysay taangiyada wax-soo-saarka, halkaas oo ay ku kiciyeen sulfuric acid si loo baabi'iyo reagent-ka sabeynta. Isku-uruurinta ayaa markaa lagu tuuraa xeebta iyadoo lagu qiimeynayo 360 mt / hr.
Bakhaarka wareejinta oo ku qalabeysan taangiyada dib u soo celinta ayaa gaarsiisay reegaha ugaarta koowaad iyo xNUMX% sulfuric acid guntiga si ay usii wadaan hawsha.
Dhanka xeebta, isku uruursanaanta isugeynta ayaa mar kale la maydhaa, oo lagu qubeyaa cyclones, oo lagu tuuraa u qeybiyeyaasha dareeraha ee kala-goynta xaddiga 28 / lagu daro 48 mesh solids. Jajabinta mesh ee 48 ayaa lagu qasi jiray oo lagu quudiyey miisaska gariirka si meesha looga saaro cunnooyinka adkaha ah. Jajabinta mesh ee 48 mesh waxaa looyaqaanaa si loo soo saaro cabbir kale oo walxaha ka kooban oo ku kala jira mesh 100. Jajabinta mesh ee 100 mesh waxay markaa ka sii horumartay iyadoo loo adeegsanayo baaskiilno loo yaqaan 'cyclones' illaa bangiyooyinka loo yaqaan 'Humphrey spirals', kuwaas oo ka saara ilmenite, zircon, iyo magnetite. Macdanadan culus ayaa loo tuuray barkad keyd oo gooni ah. Isku-darka fosfooraska ayaa laga soo saaray miisaska gariirka iyo murgacashada isku darista oo ay weheliso isugeynta jajabinta 100 / ka gooynta 48 mesh si loo soo saaro quudinta loogu talagalay duulista sare.
Dheecaanku wuxuu ku xiran yahay dheemanka, acetic acid, iyo saliida qumbaha ee 5% ee biyaha badda si loogu diyaariyo uumiga sare ee dulman, kaas oo soo saaraya bacaha diirad saaraya siligga iyo dabo fosfooraska wax soo saar ahaan. Slsphate slurry waxaa loo cabiray xNUMX% cunnooyinka adkaha ah ee loo maro cyclones, waxaa lagu maydhay biyo saafi ah, mar kale ayaa lagu duubey, oo la sifeeyay. Miirayaasha waxaa sidoo kale ku qalabeysan sayunnada maydhista.
Weelka suunka lagu wareejiyo kiimikada shaandhada ah ee lagu keydiyo goobta wax lagu keydiyo. Haddii loo baahdo, bulldozer ayaa burburin doonta waxyaabaha ku kaydsan si ay u soo saarto qalajin dheeraad ah.
Warshad daaweyn biyo ah oo ku taal goobta dhirta xeebta ayaa nadiifin doonta biyo wanaagsan oo bilaaw ah si ay u soo saarto biyo saafi ah oo lagu maydho isla markaana la siinayo kuleylka loo isticmaalo diyaarinta rerinta dheeman. Qeexitaanka biyaha cusub waxay dajisaa ugu badnaan klorine-ka 350 ppm.
Nidaamka fosfooraska loo adeegsado Santo Domingo wuxuu soo saaraa dhowr durdur oo qashin ah, kuwaas oo dhammaantood lagu ridayo aagagga laga qodo miinada ama gadaasha qashin-qubka loo dhisay ciid. Xeebta, dhul-ahaanta dabiiciga ah waxaa looga hadhaa sidii dhul-beereed joogto ah si looga fogaado meelaha qashinka ka soo baxa biyaha xeebta. Biyaha wasakhda ah ayaa dib loo warshadaynayaa. Qulqulka qashinka waxaa ku jira 300 mt / hr warshadda saboolka ka hor unugyada sabeynta; dabo ubax duullimaadyo ay ku jiraan 1,340 mt / hr slurry at 30% cunnooyinka adkaha ah; wasakhda silica waxay ka uruurisaa ubaxyada sare iyo biyo maydha, oo ay kujirto isku darka 3,000 mt / hr slurry ee xirmooyinka 5%; iyo macdanaha culus ee ku urursan Hireega lafdhabarta, wadarta guud ee 72 / mt hr of slurry at 25% solids.
Xirmooyinka laga soo saaray Santo Domingo waxaa loo qaadayaa 100 km dhanka tas-hiilaadka ee Punta Belcher oo ku taal Jasiiradda Magdalena iyada oo loo sii marayo xarkaha la soo jiiday. Goobaha lagu keydiyo Punta Belcher waxaa loo dhisay 100,000 mt oo ah uruurinta. Doonta ayaa gacanta ku haysa maraakiibta ilaa 40,000 DWT, iyo nidaamka xamuulka isku urursiga wuxuu leeyahay awood xNUMX mt / hr.
Waxaa laga daabacay joornaalka Injineerinka & Macdanta